Nootropic Choline Source Ugu Fiican Citicoline Vs Alpha GPC
Nooca ugu fiican ee loo yaqaan 'Nootropic Choline Source' Citicoline Vs. Alpha GPC
Kaabitaanka Choline iyo Nootropic Dheer
Codioline Sodium iyo Alpha GPC waa laba ka mid ah waxyaabaha ugu caansan ee loo yaqaan 'nootropic supplements' ee lagu yaqaan inay ku jiraan qaddar deeqsinimo leh oo choline ah. Choline waa mid ka mid ah kiimikooyinka muhiimka ah ee door muhiim ah ka ciyaara ilaalinta shaqada maskaxda ee saxda ah. Choline waxaa si rasmi ah loogu aqoonsaday inay tahay nafaqo muhiim ah 1998 Machadka Daawada (IOM).
Maskaxdayaga maskaxdu waxay kuxirantahay choline inay si sax ah u shaqeeyaan. Choline waxay hormuud u tahay neurotransmitter-ka loo yaqaan Acetylcholine. Tani waa mid ka mid ah kuwa ugu badan ee neerfayaasha ku shaqeeya nidaamka neerfaha dhexe. Mid ka mid ah howlaheeda badan ayaa ah in ay door muhiim ah ka cayaarto kobcinta diiradda iyo joogtaynta taxaddarka. La'aanta Acetylcholine ayaa lala xiriiriyay yaraanta xusuusta iyo niyad jab.
Marka, waa maxay farqiga u dhexeeya Citicoline iyo Alpha GPC? Hagaag, waxaan u diyaarinay tilmaan-bixin qotodheer oo kaa caawinaysa inaad fahanto dhamaan dhinacyada muhiimka ah ee ku saabsan Citicoline iyo Alpha GPC ee ay tahay inaad ogaato.
Waa maxay Sodium Codioline (CDP Choline Sodium)
Sodium Citicoline (Cytidine diphosphocholine), sidoo kale loo yaqaan Qalabka CDP, waa xarun leh sifooyin difaaca neerfaha. Waxay ka kooban tahay choline iyo cytidine. Iyada oo ah isha ugu fiican ee choline, aaladda cilmiga cilmiga citicoline ee safarka dopamine, waxay sii kordhineysaa sii deynta maskaxda. In kasta oo choline ay ka caawiso shaqada maskaxda, cytidine ayaa faa'iido u leh markii loo beddelo uridine.
Citicoline waxaa loo heli karaa laba qaab: sida citicoline sodium, oo ah daawo loo qoro daaweynta daaweynta xanuunnada neerfaha, iyo sida saldhigga-bilaashka ah ee citicoline, oo ah cunto dheeri ah. Kordhinta leh cicoline nootropic ayaa la rumeysan yahay inay kor u qaaddo heerka garashada iyo hagaajiso soo kabashada neerfaha ee xaaladaha kala duwan.
Citicoline ayaa la sheegay in asal ahaan lagu sameeyay Japan sidii daawo loogu talagalay istaroogga. Waqtigan xaadirka ah, waxaa loo isticmaalaa qaybo badan oo adduunka ah sidii qayb loogu talagalay fiitamiinno. Magaca ugu caansan ee magaca citicoline waa Ceraxon. Waxaa sidoo kale lagu iibiyaa magacyo kale oo magac leh, oo ay ku jiraan Cebroton, Cidilin, iyo Cognizin, iyo kuwo kale. Citicoline sodium cas no waa budada Citicoline Sodium (CDP Choline Sodium)33818-15-4).
Sidee ayuu Citicoline Sodium u shaqeeyaa?
Citicoline Sodium Powder waa hodan Isha Choline. Si aad u fahamto sida ay u shaqeyso citicoline, waxaa muhiim ah inaad marka hore fahanto sida choline u shaqeyso.
Choline waa mid ka mid ah kiimikooyinka muhiimka ah ee ka ciyaara door muhiim ah joogtaynta shaqada maskaxda ee munaasibka ah. Taasi waa sababta cunista cunnooyinka iyo kaabisyada hodanka ku ah choline ay si weyn loogu dhiirrigelinayo, maaddaama ay saameyn wanaagsan ku leedahay Horumarinta maskaxda.
Citicoline wuxuu ku dhacaa xuubka unugyada iyada oo loo marayo geedi socodka kiimikada. Cilmi baaris ayaa lagu ogaadey in maadada 'CDP chlorine' ay kor u qaaddo firfircoonida maskaxda iyadoo la adeegsanayo habka lagu taageerayo isku xirnaanta 'citicoline synthesis'. Citicoline wuxuu kordhiyaa kiimikada maskaxda ee loo yaqaan phosphatidylcholine, taasoo muhiim u ah shaqada maskaxda. Waxay kaloo yareynaysaa dhaawaca unugyada maskaxda markay dhacdo dhaawaca maskaxda.
Maxaa loo isticmaalaa CDP Choline Sodium?
Mid ka mid ah dhinacyada loo baahan yahay ee ku saabsan Citicoline waa inay jiraan waxyaabo badan oo Citicoline Sodium ah. Citicoline-ka Nootropics waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo cudurada sida Alzheimers, trauma madaxa, noocyada kale ee waallida, cudurada maskaxda ku dhaca sida istaroogga, cudurka Parkinson, xusuusta oo la xiriirta da'da, glaucoma, feejignaan la'aanta hyperactive disorder (ADHD). Kuwa soo socdaa waa kuwa caadiga ah ee loo isticmaalo Citicoline Sodium:
Waxay kaa caawin kartaa ka hortagga lafa-beelka maskaxda
Citicoline waxaa la rumeysan yahay inuu wax ku ool yahay gudaha Kordhinta xusuusta. Sidaa daraadeed, xasuusta da'da oo luma, oo ay keento da 'weyn oo udhaxeysa waxaa lagu hagaajin karaa cunitaanka citicoline. Haddii aad leedahay waalid gaboobay ama qof qaraabo ah oo ay xusuustu hoos ugu dhacdo da'da, waa inaad tixgelisaa ku darista dheeri ah maadada citicoline ee cuntadiisa / keeda.
Waxay kaa caawin kartaa dhaqso u bogsashada istaroogga kadib
Cilmi baaris ayaa muujisay in qalabka loo yaqaan 'citicoline' uu ka caawiyo soo kabashada istaroogga. Haddii aad ku qaadatid dawada loo yaqaan 'citicoline' gudaha 24 saacadood ka dib markii aad la kulantid istaroog, waxaad u badan tahay inaad si buuxda u bogsato dhawr bilood gudahood. Tani waxay ku saleysan tahay daraasad ka kooban kala-soocid (3 qiyaasood oo citicoline ilaa 1 placebo) tijaabin laba-indho-indho-indho-indheyn ah oo lagu hago 21 xarumood oo Mareykanka ah
Daaweynta iyadoo la isticmaalayo cusbada sodium ee citicoline waxay ahayd in lagu bilaabo 24 saacadood gudahood istaroogga oo la sii waday 6 toddobaad. Qiimaynta natiijadeedu waxay ahayd 12 toddobaad. Qiyaasta istaroogga ee NIH waxaa loo isticmaalay isugeyn Labada koox ee 500 mg citicoline iyo kooxda 2,000 mg citicoline waxay leeyihiin horumar weyn marka loo eego boqolkiiba bukaanka kuwaas oo natiijo wanaagsan kahelay Index Barthel ee maalmaha 90. Daraasadu waxay soo gabagabeysay in budada afka loo yaqaan 'Citicoline sodium' loo isticmaali karo si badbaado leh waxyeelada ugu yar ee daaweynta istaroogga daran.
Waxay xoojin kartaa awooda wax barasho
Mid ka mid ah faa iidooyinka ugu weyn ee lagu daro kaabis cicoline nootropic waa in ay horseed u noqoto maskaxda sifiican u shaqeysa. Waxay sidaas u sameyneysaa iyadoo la kordhinayo socodka dhiigga iyo wax soo saarka tamarta ee maskaxdaada. Intaa waxaa sii dheer, choline waxay ka caawineysaa in jidadka maskaxda ku jira ay uga fogaan karaan dheecaannada si aad si dhakhso leh u xasuusato macluumaadka. Tani waxay gacan ka geysan kartaa sare u qaadida awooda waxbarashada ee ardayda.
Waxaa jira faa iidooyin badan oo sodium codioline ah oo aan sugi karno. Faa'iidada ugu badan waa suurtagalnimada kobcinta saameynta kale ee nootropics. Natiijo ahaan, dad badani waxay u tixgeliyaan budada Citicoline Sodium budada inay tahay isku-darka qeexan ee barnaamijyada dheeraadka ah ee badan.
Miyuu Citicoline kordhiyaa Dopamine?
dopamine waxay muhiim u tahay shaqada maskaxeed ee aan fiicnayn, iyo sidoo kale qaar badan oo ka mid ah caadooyinkayaga maalinlaha ah iyo dhaqankeena. Waxay door muhiim ah ka ciyaaraysaa dhaqdhaqaaqa, doorbidashada cuntada, caadooyinka, feejignaanta, iyo niyadda.
Dopamine waxaa sida caadiga ah la kiciyaa marka maskaxdu ka filayso abaalmarin ka timid dabeecadaha qaarkood. Sidoo kale waxay na digaysaa oo na dhiirrigelisaa inaan raacno waxyaabaha buuxiya baahiyadeena iyo damacyadeena. La'aanta heerarka dopamine-ku filan ayaa xaddidi kara waxqabadka garashada waxayna sababi kartaa xaalad xun oo ah blues-ka.
Mid ka mid ah qaybaha ugu waaweyn ee Citicoline, DP chlorine, waxay dhiirigelisaa siideynta dopamine waxayna kordhisaa heerarka dopamine guud ahaan iyada oo loo adeegsanayo sida loo yaqaan 'dopamine agonist', iyo sidoo kale in laga hortago dib u soo kicinta dopamine.
Citicoline Sodium (CDP Choline Sodium) budada (33818-15-4) cusbo, oo ah maaddo biyo-biyo-leh, ayaa si dhakhso leh loogu dhex galaa marinka dhiigga. Kani maahan mid siinaya 90% heerka bioavailability, laakiin sidoo kale waxay kordhineysaa waxtarkiisa. Uridine, oo ay weheliso Cdp choline dopamine, waxay kobcisaa kobcinta soo-dhoweynta daawada dopamine ee maskaxda iyagoo dhaqaajinaya calaamadaha D1 iyo D2, iyagoo gacan ka geysanaya ka hortagga soo-dhoweynta daawada dopamine.
Waa maxay farqiga u dhexeeya Choline iyo Citicoline?
Aynu eegno citicoline vs choline oo aan aragno sida isbarbardhigaan. CDP Choline iyo Citicoline waa isku mid iyo wax la mid ah. Waxay tixraacaan cilmi nafsi ama nootropic oo cilmi baaris lagu ogaaday inay wax ku ool tahay kor u qaadista xoogga iyo tamarta maskaxda.
Sida loo Qaado Citicoline
Waqtiga xaadirka ah, ma jiraan qiyaasta qiyaasta daawada citicoline nootropic. Si kastaba ha noqotee, inta badan barta cilmi baarista ayaa ah 250 mg ilaa 500 mg si ay u noqdaan daawada ugu fiican ee loo yaqaan 'citicoline qiyaasta nootropic'.
Citicoline wuxuu u muuqdaa inuu wanaajinayo natiijooyinka shaqeynaya iyo yareynta yaraanta neurologic iyada oo 500 mg oo ah citicoline ay u muuqato in ay tahay qiyaasta cicolic nootropic ee ugu habboon. Qiyaasta lagu taliyey ee ugu habboon Awoodda Aqoonta wuxuu udhaxeeyaa citicoline 500 mg ilaa 2000mg maalinti laba daawo oo loo qaybiyo (250mg ilaa 1000mg qaadashokiiba).
Hoos u dhaca xirfadaha fikirka da 'ahaan: 1000-2000 mg oo ah daawada citicoline maalin kasta.
Cudurka joogtada ah ee xididdada dhiigga ee u adeega maskaxda (cudur dheef-shiid kiimikaad): 600 mg oo ah citicoline maalintii.
Daaweynta degdegga ah ee istaroogga oo ay ugu wacan tahay xiidanka (ischaemia stroke): qiyaasta lagu talinayo ee citicoline ee istaroogga waa 500 mg ilaa 2000 mg maalin kasta oo laga bilaabo 24 saacadood istaroogga.
Bixiyeyaasha daryeelka caafimaadku waxay siinayaan daawada citicoline si toos ah (IV) ee hoos u dhaca da'da la xiriira ee xirfadaha fakarka ama cudurka daba-galka maskaxda.
Irbad lagu duri karo
Bixiyaasha daryeelka caafimaadku waxay siyaan daawada citicoline-ka iyadoo lagu durayo cudurka cerebrovascular joogto ah
Ma aaminbaa in la qaato Citicoline?
Qiyaasta loo yaqaan 'citicoline nootropic dose' waxaa loo arkaa inay aad waxtar u leedahay. Markii lala qaato supplements kale, citicoline waxaa loo arkaa inuu xoogaa xoog badan yahay. Waxaa jira caddeyn sii kordheysa oo faa iidooyinkeeda ah Kobcinta Garashada, hagaajinta shaqada neerfaha, iyo suurogalnimada soo kabashada qabatinka.
Ka sokow waxtarka, citicoline si fiican ayaa loo diiwaangeliyay inay aamin tahay. Waxaa laga helay muuqaal sumeysan oo aad u hooseeya xoolaha iyo bini aadamka labadaba. Hal daraasad, qiyaasta sare ee maadada 'citicoline' oo loo yaqaan '2000mg' maalintiiba ayaa la tijaabiyay welina ma helin wax waxyeelo ah.
Baadhitaan la sameeyay ayaa lagu ogaaday in maadada 'citicoline' ay amaan tahay marka afka loo qaato muddo 90 maalmood ah. Nabdoonaanta isticmaalka muddada-dheer ayaa wali la soo gabagabeyn doonaa. Marar dhif ah ayuu leeyahay qof kasta oo adeegsada maadada citicoline inuu soo sheego inuu la kulmo dhibaato Saamaynta Dhinacyada Citicoline.
In kasta oo aysan dad badani la kulmin waxyeelooyin daran oo ku saabsan citicoline-ka, hadana weli waxaa jirta suurtagal in waxyeellooyinka qaarkood ay dhici karaan. Dhowr adeegsadeyaal ah ayaa tusaale ahaan soo sheegay inay la kulmaan maadada citicoline walwalka.
Waa kuwan astaamaha tilmaami kara inaad la kulanto dhibaatooyinka soo raacaya citicoline:
Ma jiro macluumaad ku filan oo la isku halleyn karo oo ku saabsan amniga qaadashada kaabista haweenka uurka leh ama haweenka naasnuujinaya. Sidaa darteed, haweenka uurka leh iyo hooyooyinka nuujinaya ma aha inay isticmaalaan sunta loo yaqaan 'Citicoline'.
Waa maxay Alpha GPC
Alpha GPC waa a Isku-Darka Nootropic taas oo lagu yaqaan inay wanaajiso waxqabadka jirka iyo kor u qaadida shaqada maskaxda. Alpha gpc nootropic waxay u dhacdaa inay noqoto mid ka mid ah ilaha ugu waxtarka badan ee choline; kaasoo waxtar u leh jirkeena, maadaama loo isticmaalo sameynta neurotransmitter-ka caawiya xusuusta iyo murqaha oo foosha.
Alpha GPC waa awood ku filan oo loo isticmaali karo daawo ahaan, hase yeeshee jilicsan oo ku filan in loo isticmaalo kaabis ahaan. Waxaa loo yaqaanaa inay hagaajiso xusuusta iyo soo saarida awooda maskaxda. Tan ka dib, waxaa loo arkaa inay tahay kaabis nafaqo leh oo rajo leh oo loogu talagalay cayaaraha, iyo qof kasta oo kale oo doonaya inuu caawiyo maskaxdooda isla mar ahaantaana kobciya awooddooda jireed.
Sidee ayuu u shaqeeyaa Alpha GPC?
Alpha GPC waxaa la ogaaday inay kordhiso acetylcholine, taas oo ah kiimikal kujira maskaxdeena oo gacan ka gaysata hagaajinta xusuusta iyo kordhinta awooda barashada.
Faa'iidooyinka Alfa GPC
Waxay wanaajisaa shaqada maskaxda
Alfa maskaxda nootropic waxaa si weyn loogu yaqaanaa kor u qaadista garashada iyadoo ay ugu wacan tahay awooda ay ku gaari karto maskaxda, taas oo ay suuragal ku tahay qaabkeeda loo yaqaan 'choline form'. Inta badan Alpha GPC waxay adeegsadaan diiradda maskaxda iyo murqaha. Dib-u-eegista maskaxda maskaxda ee loo yaqaan 'alpha brain nootropic' oo ay soo gelisay khadka tooska ah ee isticmaale khibrad leh ayaa caddeeyay in daroogadani ay tahay mid waajib ku ah qof kasta oo doonaya inuu kor u qaado shaqadiisa / maskaxdeeda.
Waxay kordhin kartaa waxqabadka jirka
Daraasaduhu waxay cadeeyeen in hoormoonka koritaanka alpha gpc uu waxtar u leeyahay kordhinta soosaarka xoogga jirka ka dib lix maalmood oo dheeri ah. Sidaa darteed, dadka jecel jimicsiga iyo ciyaartooydu waxay tixgelin karaan ku darista budada Alpha GPC ee cuntadooda si kor loogu qaado waxqabadkooda muruqyada isla markaana kor loogu qaado xoogooda isometric. Nidaamka jimicsiga ee Alpha gpc wuxuu cadeeyay inuu qaaday waxqabad jireed heer cusub oo dhexmara rag badan oo isboorti ah.
Waxay horumarin kartaa xirfadaha aqooneed
Horumarinta daraasadda waxay soo jeedineysaa in qaadashada 1200 mg ee maskaxda maskaxda nootropic maalintii si macno leh u hagaajiso xirfadaha aqooneed ee Alzheimer's bukaanka 3 ilaa 6 bilood oo daaweyn ah. Waxaa sidoo kale la rumeysan yahay in qaadashada 1000 mg ee Alpha GPC maalin kasta ay tahay tallaal ka caawinaya hagaajinta calaamadaha waallida xididdada dhiigga. Alpha gpc dopamine sidoo kale waxay hagaajisaa niyadda bukaanka, dabeecadda, iyo xirfadaha aqooneed.
Waxay caawin kartaa bukaanka istaroogga inay soo kabsadaan
Bukaanka la il daran cudurka iskeemia (TIA) ee qaata alpha GPC ka hor inta aan la gaarin 10 maalmood ayaa la ogaaday inay soo fiicnaanayaan. Cilmi baaris ayaa soo jeedisay in bukaannada qaata 1200 mg oo ah duritaanka Alpha GPC maalin kasta muddo ah 28 maalmood, oo ay ku xigto qiyaasta daawada Alpha GPC ee afka laga qaato sedex jeer maalintii muddo 6 bilood ah, ay fursad u leeyihiin inay maskaxda ku soo kabsadaan.
Sida loo qaato Alpha GPC
Alpha GPC nootropic ama afka ayaa laga qaataa, ama waa lagu duri karaa. Markaad afka ka qaadatid, waxaad qaadan kartaa alpha GPC cunto ama cunto la'aan. Waxa dad badani la yaabeen waa in budada alfa gpc dhadhanka ay macaan tahay.
Qiyaasta Alfa GPC way kala duwan tahay iyadoo ku xiran inaad u isticmaaleyso waxqabadka jirka ama maskaxda.
Si kor loogu qaado Gubashada dufanka iyo hormoonka korniinka, waa inaad qaadataa qiyaastii 600 mg oo ah Alpha GPC, 30 illaa 60 daqiiqadood ka hor intaanad shaqeynin.
Si kor loogu qaado waxqabadka maskaxda, waxaad qaadan kartaa qadar yar oo ah 200 mg ilaa 600 mg. Waad kordhin kartaa qiyaasta si tartiib tartiib ah si aad u aragto qiyaasta kugu habboon inaad dareento ugu fiican. Alfa gpc nootropic stack with daawo kale oo ka socota Qoyska Racetam sidoo kale ku siin doona natiijooyin cajiib ah.
Waxaad qaadan kartaa qiyaaso badan Alfa GPC maalin gudaheed. Si kastaba ha noqotee, waa inaad ku ilaalisaa qiyaasaha ugu yaraan, ie 200 mg - 600 mg, waana inaad hubisaa inaad qaddarka qaadid ugu yaraan afar saacadood kala fog. In kasta oo aysan qasab ahayn, waxaa lagu taliyaa in la qaato Alpha GPC oo ay weheliso aashitada dufanka leh ee cuntada si ay si fiican u nuugto. Waxaad sidoo kale ka baran kartaa waxyaabo dheeraad ah oo ku saabsan sida loo qaato daroogada ee alfa maskaxda nootropic reddit forum halkaas oo adeegsadayaasha waayo-aragnimada leh ay wadaagaan macluumaadka ku saabsan sida ay ugu guuleysteen daroogada.
Dhibaatooyinka Alfa GPC
Xogta, ma jiraan waxyeellooyin xun oo ka yimaadda budada Alpha GPC (28319-77-9) la duubay. Markii loo isticmaalo si munaasib ah, kabitaankan cuntada ayaa u muuqda inay aad u amaan yihiin marka loo eego faallooyinka alpha gpc ee laga heli karo internetka. Qaar ka mid ah dhibaatooyinka ka soo baxa maskaxda maskaxda ee Alpha ee ilaa hadda la soo sheegay waxaa ka mid ah:
Dadka qaar ayaa soo sheegay ceeryaamo maskaxda iyo waxyeellooyin taban, iyo xaalado yar yar, oo ah boob libido. Labaduba waxay u muuqdaan inay xiriir la leeyihiin qiyaasta sare ee loo yaqaan 'choline'.
Haddii aad isku aragto mid ka mid ah dhibaatooyinkaan maskaxda ee maskaxda ee 'Alpha maskaxda nootropic', waxaa lagugula talinayaa inaad doorato qiyaasta Alfa GPC ee ka sii yar oo fiirso haddii astaamaha ay kaa bixi doonaan. Haddii astaamuhu sii socdaan ama ay sii xumaadaan xitaa ka dib markii la yareeyo qiyaasta Alfa GPC, waxaa ugu wanaagsan in dhakhtar loo raadsado isla markiiba.
Waqtiga xaadirka ah, waxaa jira cilmi baaris xaddidan oo ku saabsan adeegsiga Alpha GPC inta lagu jiro uurka iyo naasnuujinta. Sidaa daraadeed, ma jirto hab lagu ogaado haddii citicoline uu waxyeello u geysan karo ilmaha. Sidaa daraadeed, waxaa lagugula talinayaa inaadan isticmaalin haddii ay taasi khusayso kiiskaaga inuu noqdo dhinaca nabdoon.
Waa maxay Cunnooyinku hodan ku yihiin Choline
Sida Citicoline, choline waa mid ka mid ah maskaxda alfa Maaddooyinka Nootropic. Cunnooyinka aadka u sarreeya waxaa ka mid ah:
Caano dufan yar
Xididdo la jeexjeexay
miraha geed linen
Citicoline Vs Alpha GPC: Midkee ayaa wanaagsan?
Bal aan hadda aragno sida Alpha GPC budada (28319-77-9) vs choline isbarbar dhig. Labadaba Budada Citicoline Sodium (CDP Choline Sodium) budada (33818-15-4) iyo Alpha GPC waa ilaha waaweyn ee choline, taas oo kaabis ku sameysa cuntadeena faa iido dheeraad ah. Si kastaba ha noqotee waxay u muuqdaan inay sameeyaan wax la mid ah marka ay timaado hagaajinta guud ahaan shaqada maskaxda iyo heerka nuglaanta maskaxda.
In kasta oo ay jiraan wax lamid ah oo u dhexeeya cdp choline vs alpha gpc, haddana waxa jira kala duwanaansho u dhexeeya iyaga. Tusaale ahaan, labada xeryoodba waxay leeyihiin habab dheef-shiid kiimikaad. Sida alpha GPC jebiso, acetylcholine ayaa loo sii daayay iyada oo ah isku-dhaf. Dhanka kale, citicoline waxay u adeegtaa sidii soo saaritaan kiimiko isku mid ah.
Alpha GPC sidoo kale waxaa laga yaabaa inay yeelato xoogaa saameyn togan oo aan ku badnayn citicoline. Tusaale ahaan, cunista alfa GPC waxay ku dambayn kartaa muhiimada xoojinta, xoojinta awooda, iyo xitaa inay ka caawiso murqaha inay si dhakhso leh uga soo kabsadaan jimicsiga adag kadib. Alpha GPC waxay kordhisaa wax soo saarka hormoonka korniinka ee jirka bini aadamka iyadoo isla mar ahaantaana ay u dhaqmeyso sidii wax xoog kiciya.
Maadaama citicoline iyo Alpha GPC ay leeyihiin awoodooda gaarka ah, ma dhihi karno hal dheeri ayaa ka fiican tan kale. Haddii aad ka faa'iideysan doonto mid ka mid ah kabitaannada waxay kuxirantahay waxa aad ugu talagashay adeegsigaaga.
Ilaha Nootropic Choline Source
In kasta oo laga yaabo inaad ka jaqdo cuntooyinka aad cuntid, waxaa ugufiican inaad ku darto supplements ka kooban xarun waxtar leh. Isticmaalka supplements citicoline ama Alpha GPG waa hab fiican oo loogaga goyn karo nidaamkaaga.
Maaddaama iibsashada budada 'citicoline' iyo 'Alpha GPC' ay ammaan yihiin, ma jiraan wax xaddidaad sharci ah oo ku saabsan kaabisyadan. Tani waxay ka dhigan tahay inaad ka heli karto inta badan dukaanka citicoline nootropics, dukaamada dheeriga ah, dukaamada cuntada, iyo iibiyeyaasha internetka.
Haddii aad rabto inaad ka iibsato citicoline iyo Alpha GPG GNC si ku habboon iibiyaha tooska ah, waxaa muhiim ah inaad xaqiijiso in iibiyaha sumcad ku leeyahay iibinta alaabada saxda ah. Iibsashada dhabta ah ee Alpha GPG amazon waxay hubin doontaa inaad ku raaxeysan doonto dhammaan faa'iidooyinka la xiriira isticmaalka kaabista cuntada. Budada alfa gpc oo tayo sare leh oo iib ah sidoo kale diyaar ayaa looga heli karaa Wisepowder.com qiimo jaban. Waxay sidoo kale baaraandegaan alfa gpc amarada bulukeetiga waxayna si dhakhso leh ugu gaarsiiyaan cinwaanka aad doorbiday.
Citicoline iyo Alpha GPC ayaa ka mid ah nootropics-ka aadka loo soo bartay ilaa hada. Waxay leeyihiin faa'iidooyin xoog leh caafimaadka maskaxda iyo waxqabadka jirka. Haddii aad tahay qof weyn oo raadinaya xaalad maskaxeed, citicoline waxay u badan tahay inay ku siinayso kobcin maskaxeed. Haddii aad tahay qof ciyaaraha fudud oo doonaya dhakhso iyo natiijooyin jimicsi, Alpha GPC ayaa kuu shaqeyn doonta.
Maktabadda Qaranka ee Caafimaadka ee Machadka Qaranka ee Caafimaadka, Gatti G, Barzaghi N, Acuto G, Abbiati G, Fossati T, Perucca E., 1992 Sep; 30 (9): 331-5.
Doggrell SA & Evans S; Evans (Oktoobar 2003). "Daaweynta jahawareerka qaba habka neurotransmission modulation". Aragtida Khubarada Baaritaanka Dawooyinka. 12 (10): 1633-1654.
Parnetti, Lucilla; et al. (2007). "Hordhaca Cholinergic ee daaweynta cillad garashada: habab aan waxtar lahayn ama u baahan dib-u-qiimeyn?". Joornaalka cilmiga neerfaha. 257 (1-2): 264–9.
1.Choline iyo Nootropic Cuntada dheeriga ah
2.Waa maxay Citicoline Sodium (CDP Choline Sodium)
3.Sidee Ayuu U shaqeeyaa Sodium Citicoline?
4.Waa maxay CDP Choline Sodium loo isticmaalo?
5.Citololine ma kordhiyaa Dopamine?
6.Waa maxay farqiga u dhexeeya Choline iyo Citicoline?
7.Sidee loo Qaadaa Citicoline
8.Ma ammaan baa in la qaato Citicoline?
9.Waa maxay Alpha GPC
10.Sidee ayuu u shaqeeyaa Alpha GPC?
11. Faa'iidooyinka GPC
12.Sidee loo qaadaa Alpha GPC
13. Alfa GPC waxyeellooyin
14. Maxay Cunnooyinku hodan ku yihiin Choline
15.Citicoline Vs Alpha GPC: Kee baa wanaagsan?
16. Xigasho Nootropic Choline